भारतमा हाई अलर्ट: घुसे लश्करका आतंकी ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
भारतमा हाई अलर्ट: घुसे लश्करका आतंकी !
नयाँ दिल्ली,एजेन्सी : भारतमा लश्करे–तैयबाका २० देखि २१ जना अतंकवादी घुसेको खबर प्राप्त भएपछि राजधानी दिल्लीसहित मुम्बई, राजस्थान, पञ्जाबमा सुरक्षाकर्मीलाई हाई अलर्टमा राखिएको छ । दिल्ली प्रहरीले यसबारे एक एडवाइजरी नै जारी गरेको छ ।
समाचार एजेन्सीका अनुसार दिल्ली प्रहरीको स्पेसल सेलको तर्फबाट यो एडवाइजरी जारी गरिएको हो । जसमा जिल्ला, मेट्रो र रेलवे प्रहरीको युनिटलाई अलर्टमा बस्न भन्दै बजार, धार्मिक स्थान, मल, मेट्रो र रेलवे स्टेसनमा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त राख्न भनिएको छ ।
एडवाइजरीमा प्रहरीलाई हाई अलर्ट बस्न र सन्दिग्ध व्यक्ति, वस्तु, गाडी आदिमा नजर राख्न र जाँच गर्न भनिएको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार लश्करका आतंकीहरुले दिल्ली, मुम्बई, राजस्थान वा पञ्जाबमा घटना घटाउन सक्ने सूचना प्राप्त भएको छ ।
एडवाइजरी जारी भएपछि दिल्लीको सुरक्षा व्यवस्था कडा परिएको छ । संवेदनशील मानिएका क्षेत्रमा पिसिआरका १० वटा भ्यान तैनाथ गरिएको छ जसमा राष्ट्रिय सुरक्षा गार्ड र कमाण्डो फोर्स रहेका छन् ।